मेरो कथा – Hatuwa Herald
Home > संस्मरण > मेरो कथा
सम्झना छ? परिक्षा हलमा एकघन्टा कति छिटो बित्छ? हेरिरहेको फिलिम कत्ति चाँडै सकिन्छ? तर, बिचबिचमा आउने विज्ञापन कत्ति लामो लाग्छ।
म सोचिरहेको छु- मेरो जीवनको ३५ बर्ष मनपर्ने सरको क्लासझैँ कत्ति चाडै सकिएछ।
र, ३५ बर्षको उमेरमा मलाई १ घन्टा पनि ‘काम’ गरेजस्तो लागेको छैन। म त आफ्नो सपना पुरा गरिरहेको छु। लक्ष्मि र सरस्वतीसँगै हुँदैनन् भन्थे। तर, दुवै मिलेर मलाई माया गरिरहेका छन्।
मैले मुर्ति तयार गरेका दिन संसार आफै सुन्दर हुनेछ ।…